* သားအိမျကငျဆာတောငျ ပြောကျတယျဆိုတဲ့ ပေါကျပနျးဖွူ နှငျ့ လယျပုဇှနျလုံး – Thukhuma
ဆေးသှငျးလိုကျ ဓာတျကငျလိုကျနဲ့ ဆေးရုံမပွတျတကျလိုကျဆငိးလိုကျနဲ့ ဆရာဝနျစုံအောငျကုလာရငျးကပဲ ကငျဆာရောဂါကတော့ တနတေ့ခွား တတိတိနဲ့တိုးလာတာ …..
အခုတော့ အဆငျ့လှနျဆိုပီး သမားတျောကလညျး ခီမိုထပျသှငျးဖို့ တောငျလကျမခံတော့ပါဘူး ….ဓာတျရောငျခွညျလညျးတခေါကျကို၃၅ကွိမျစီ၂ကွော့ပွနျကငျထားပီမို့ ထပျကငျလို့လညျးမရတော့ဘူးတဲ့….
အဲ့လိုနဲ့ဟိုမေးဒီမေးမေးကွရငျးကပွညျကအမတဝမျးကှဲဆီကကွားတဲ့ဆေးကလယျပုဇှနျလုံး(ဂဏာနျးလုံး)ကိုပေါကျပနျးဖွူရှကျနဲ့ခကျြစားရမယျ ဇီးဖွူသီးပွုတျရညျနဲ့ဖနျရဆေေးတာ ပွုတျရညျထဲဝငျစိမျတာလုပျပေးရမယျတဲ့။
ဇီးဖွူသီးပွုတျရညျကလဲကောငျးပါတယျအမကေမစိမျနိုငျလို့ရခြေိုးတာဖနျရဆေေးတာလေးတှလေုပျရုံနဲ့တောငျဆယျရကျအတှငျးအကြိတျတှနေဲ့ ရောငျရမျးပွီး အသားမာကွီးဖွဈနတေဲ့ ဗိုကျကောပေါငျတှကေော အကြိတျတှပြေောကျပွီးခပျြရပျသေးကြုံ့ပွီးပြော့ဖတျသှားပါပွီ ……
ခွတှေလေကျတှဖေောရောငျနတောလဲအကုနျပြောကျပွီးအသားအရစေိုပွလောပါပွီ။ အမလေို့ပဲ ကငျဆာရောဂါဝဒေနာသညျတှေ ဒီစာလေးဖတျပွီး အနာနဲ့ဆေးတှစေ့ခေငျြလို့fbပျေါဒီpostလေးရေးတငျလိုကျတာပါ။
အမကေတော့နောကျဆုံးအဆငျ့ရောကျတဲ့အထိ၆နှဈကွာမှ ဆေးတှရေ့တော့ပြောကျဖို့တော့ သိပျမမြှျောလငျ့နိုငျပါဘူး….ရောဂါခံစားရသကျသာပွီး အသကျရှညျရှညျလေးနနေိုငျဖို့ပဲ အစှမျးကုနျုကွိုးစားနကွေရတာပမေဲ့ ရောဂါနုသူဆိုလုံးဝပြောကျသှားမယျလို့ထငျပါတယျရှငျ…..။Ohnmar Htun
ဆေးသွင်းလိုက် ဓာတ်ကင်လိုက်နဲ့ ဆေးရုံမပြတ်တက်လိုက်ဆငိးလိုက်နဲ့ ဆရာဝန်စုံအောင်ကုလာရင်းကပဲ ကင်ဆာရောဂါကတော့ တနေ့တခြား တတိတိနဲ့တိုးလာတာ …..
အခုတော့ အဆင့်လွန်ဆိုပီး သမားတော်ကလည်း ခီမိုထပ်သွင်းဖို့ တောင်လက်မခံတော့ပါဘူး ….ဓာတ်ရောင်ခြည်လည်းတခေါက်ကို၃၅ကြိမ်စီ၂ကြော့ပြန်ကင်ထားပီမို့ ထပ်ကင်လို့လည်းမရတော့ဘူးတဲ့….
အဲ့လိုနဲ့ဟိုမေးဒီမေးမေးကြရင်းကပြည်ကအမတဝမ်းကွဲဆီကကြားတဲ့ဆေးကလယ်ပုဇွန်လုံး(ဂဏာန်းလုံး)ကိုပေါက်ပန်းဖြူရွက်နဲ့ချက်စားရမယ် ဇီးဖြူသီးပြုတ်ရည်နဲ့ဖန်ရေဆေးတာ ပြုတ်ရည်ထဲဝင်စိမ်တာလုပ်ပေးရမယ်တဲ့။
ဇီးဖြူသီးပြုတ်ရည်ကလဲကောင်းပါတယ်အမေကမစိမ်နိုင်လို့ရေချိုးတာဖန်ရေဆေးတာလေးတွေလုပ်ရုံနဲ့တောင်ဆယ်ရက်အတွင်းအကျိတ်တွေနဲ့ ရောင်ရမ်းပြီး အသားမာကြီးဖြစ်နေတဲ့ ဗိုက်ကောပေါင်တွေကော အကျိတ်တွေပျောက်ပြီးချပ်ရပ်သေးကျုံ့ပြီးပျော့ဖတ်သွားပါပြီ ……
ခြေတွေလက်တွေဖောရောင်နေတာလဲအကုန်ပျောက်ပြီးအသားအရေစိုပြေလာပါပြီ။ အမေ့လိုပဲ ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာသည်တွေ ဒီစာလေးဖတ်ပြီး အနာနဲ့ဆေးတွေ့စေချင်လို့fbပေါ်ဒီpostလေးရေးတင်လိုက်တာပါ။
အမေကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်တဲ့အထိ၆နှစ်ကြာမှ ဆေးတွေ့ရတော့ပျောက်ဖို့တော့ သိပ်မမျှော်လင့်နိုင်ပါဘူး….ရောဂါခံစားရသက်သာပြီး အသက်ရှည်ရှည်လေးနေနိုင်ဖို့ပဲ အစွမ်းကုန်ုကြိုးစားနေကြရတာပေမဲ့ ရောဂါနုသူဆိုလုံးဝပျောက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်…..။Ohnmar Htun